‘ड्राइभिङ शिक्षालाई कलेजमा विस्तार गर्ने योजना छ’ – Arthik Awaj
‘ड्राइभिङ शिक्षालाई कलेजमा विस्तार गर्ने योजना छ’
By आर्थिक आवाज २०७६ माघ २१ गते मंगलवार ११:५६ मा प्रकाशित
सनराइज ड्राइभिङ स्कुल प्रालि
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र गण्डकीमा ट्रायल दिँदा अब सेवाग्राहीले २४ रुपैयाँ मात्र शुल्क तिरे पुग्छ । नयाँ टेण्डर प्रक्रिया अनुसार सस्तो शुल्कमा ट्रायल दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । पोखरामा लामो समयदेखि सेवा प्रदान गरिरहेको सनराइज ड्राइभिङ स्कुल अन्तर्गतको कुशुम सप्लायर्सले टेण्डर पारी ट्रायलका लागि गाडी उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । यसैक्रममा सनराइज ड्राइभिङका अध्यक्ष वसन्त भट्टचनसँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानी :
२४ रुपैयाँमा ट्रायल दिन कसरी सम्भव भयो ?
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र गण्डकी अन्तर्गत कारको ट्रायल दिन अब मात्र २४ रुपैयाँ मात्र लाग्ने भएको छ । एउटा परीक्षार्थीले ट्रायल परीक्षामा लाग्ने इन्धन तथा अन्य खर्चको सबै हिसाब गर्दा करिब २४ रुपैयाँले खर्च पुग्छ । हामीले यसबाट फाइदा नलिइकन सेवाग्राहीलाई सुविधा प्रदान गरेका हौं । ड्राइभिङ सेवा हाम्रो व्यवसाय भएकाले नागरिकलाई सहज बनाउने हाम्रो दायित्व तथा कर्तव्य पनि हो । यसैले सस्तोमा सेवा दिन सुरु गरेका हौं । सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत बहन गर्ने उद्देश्यले हामी यो सेवामा जोडिएका हौं ।
ट्रायलका लागि तपाईंहरुकै गाडी कसरी प्रयोगमा आए ?
यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीमा ट्रायलका लागि मापदण्ड अनुसारका सवारीसाधनहरु न्युनतम मूल्यमा हामीले उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयले साधन उपलब्ध गराउन विभिन्न सर्तहरु राखेर टेण्डर आह्वान गर्छ । २०७६ कात्तिक १९ गते सार्वजनिक भएको टेण्डर प्रक्रियामा हामीसहित अन्य फर्महरु सहभागी थिए । नीति नियम अनुसार सबै प्रक्रियाहरु पुरा गरी न्युनतम दररेटमा हामीले टेण्डर प्राप्त गरेका हौं । सोही बमोजिम सरकारको नीति नियम नबाझिने गरी सम्झौतालाई अक्षरंश पालन गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौं । धेरैले २४ रुपैयाँमा कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि प्रश्न गर्नुभयो । सेवाग्राहीको हितका लागि हामी यो काम गर्न सक्छौं । मोटरसाइकल तथा स्कुटरको ट्रायलका साधान पनि न्युनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । अहिलेसम्म कुनै गुनासो आएको छैन ।
ड्राइभिङ व्यवसायमा कहिलेदेखि लाग्नुभयो ?
बिगत २०५४ सालदेखि म निरन्तर यो व्यवसायमा आबद्ध छु । पछिल्लो समय म सहित पोखराका प्रतिष्ठित युवा व्यवसायी साथीहरुको संलग्नतामा सनराइज ड्राइभिङ स्कुल र अन्य व्यवसाय सँगसँगै सञ्चालन गरिरहेका छौं । ड्राइभिङ व्यवसाय पहिला व्यवस्थित थिएन । रंगशालाको ग्राउण्ड प्रयोग भइरहेको थियो । सरकारको प्राथमिकतमा पनि परेको थिएन । रंगशाला भन्दा बाहिरबाट व्यवस्थित रुपमा ड्राइभिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवधारणा हामीले नै ल्याएका हौं । पोखराको नयाँबजारसहित रंगशाला गेट अगाडि, फुलबारी र बिरौटामा हामीले ड्राइभिङ स्कुल व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरेका छौं । २०७२ सालबाट सनराइज ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालनमा आएको हो । पोखरामा रहेका विभिन्न ड्राइभिङ स्कुलहरु मर्ज भएर सनराइजको स्थापना भएको हो ।
सनराइज ड्राइभिङ स्कुलका विशेषताहरु के–के छन् ?
पछिल्लो समय गाडीको ट्रायल परीक्षा दिन नीति नियमहरु पनि परिवर्तन भएका छन् । परिवर्तित नीति नियम अुनुसार हामीले अन्य प्रक्रियाबाट लाइसेन्स लिन नभइ दक्ष भएर परीक्षा पास गरी लाइसेन्स लिने वातावरण तय गर्न सफल भएका छौं । पोखरामा गर्व गर्न लायकको ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालन गर्न पाउँदा हामी निकै खुसी छौं । सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउन हामी निरन्तर खटिरहेका छौं । बिहानदेखि बेलुकासम्म सधैं हाम्रो सेवा उपलब्ध छ । सरकारसँगको सम्झौतामा ट्रायलमा उपलब्ध हुने मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, जिप, डेलिभरी भ्यान, मिनिबस, मिनीट्रक, बस ट्रक लहरी, ट्याक्टर, पावर टेलर न्युनतम मूल्यमा ट्रायल दिने साधनहरु हामीले नै उपलब्ध गराएका छौं । त्यही साधनबाट नै सेवाग्राहीले ट्रायल दिन पाउनेछन् ।
पछिल्लो समय कस्ता खालका गाडी ट्रायलमा प्रयोग हुन्छन् ?
नयाँ शुल्कमा ट्रायलमा उपलब्ध हुने साधनहरु नयाँ विशेषतासहितका छन् । पुराना मोडलका साधनबाट ट्रायल दिनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । युरो मापदण्डका २०१९ मोडलका गाडीहरु ट्रायलमा राखिएका छन् । पावर स्टेरिङ, एसि, पावर विन्डोज, एबिएस एण्ड इबिडी सिस्टम, एयर व्याग, ८ सय सिसी क्षमताको इन्जिन, ग्राउण्ड किलियरेन्स १ सय ८० सिसी, व्याक सेन्सर लगायतका विशेषता भएका गाडीहरु ट्रायलमा राखिएका छन् ।
ड्राइभिङ व्यवसायका समस्याहरु के–के छन् ?
सरकारले यो व्यवसायलाई केन्द्रित गरेर कुनै नीति नियम बनाएको छैन । कुनै सुविधा पनि हामीले पाएका छैनौं । राज्यलाई कर तिर्ने काम मात्रै भएको छ । राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व हामीले निजी क्षेत्रबाट पुरा गरिरहेका छौं । सडक दुर्घटना न्युनीकरणका लागि सचेतना जगाउने तथा दक्ष चालक उत्पादन गर्ने दायित्व राज्यको हो । राज्यले गर्न नसकेको काम हामी निजी क्षेत्रबाट जोखिम बहन गरी गरिरहेका छौं । सोखका लागि तथा विलासिताका लागि खरिद गरिने साधनको र हामीले सेवामुलक व्यवसाय गर्नका लागि गाडी किन्दा पनि समान कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले निश्चित ठाउँ तोकेर मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार बन्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन समेत सकेको छैन । सिक्ने साधनमा राज्यले करमा सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
सेवाग्राही तथा ड्राइभिङ सिक्न चाहने परीक्षार्थीलाई तपाईंको सुझाव के छ ?
पछिल्लो समय बजारमा साधनहरु बढिरहेका छन् । जनसंख्या बढिरहेको छ । सडक दुर्घटनाहरु पनि बढ्नु चिन्ताको विषय बनेको छ । त्यस कारण दक्ष भएर मात्रै आफ्नो सवारी चलाउन सक्ने हुनुपर्छ । यसका लागि हामीले दक्ष चालक उत्पादन गर्ने अभियानमा कहीँ कतै सम्झौता गर्दैनौं । लाइसेन्स महत्वपूर्ण कुरा होइन, सिप र दक्षता हासिल गर्नु प्रमुख आवश्यकता हो । यो आवश्यकतालाई सनराइज ड्राइभिङ स्कुलले पुरा गर्छ । ड्राइभिङ सिकाउन हामीसँग दक्ष प्रशिक्षकको व्यवस्था छ । हाम्रो चारैवटा शाखामा पुगेर आवश्यकता अनुसारको जानकारी लिइ ढुक्कसँग सेवा लिन सक्नुहुनेछ । पूर्ण पारिवारिक वातावरणमा महिला दिदीबहिनीहरुले समेत कुनै अप्ठ्यारो बिना सेवा लिन सक्नुहुनेछ । हाम्रा सम्पूर्ण शाखामा नयाँ प्रविधिका गाडी तथा अन्य साधनहरुबाट सिकाउने काम भइरहेको छ । ट्रायलमा जुन साधनहरु प्रयोग हुन्छन्, हामीले त्यही मोडलका साधनबाट ड्राइभिङ सिकाउने कामसमेत गरिरहेका छौं । गण्डकी यातायातमा ट्रायलमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण साधनहरुसमेत हामीले नै सरकारको नियम अनुसार उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौं ।
सनराइज ड्राइभिङको अबको भावी योजना के छ ?
मैले संसारका धेरै मुलुकहरु घुमेको छु । अन्य मुलुक र नेपालको ड्राइभिङ शिक्षा लिने र दिने प्रक्रिया धेरै फरक छ । यसलाई सुधार्ने तथा व्यवस्थित गर्ने दायित्व सरकारको मात्रै होइन हामी निजी क्षेत्रको पनि हो । ड्राइभिङ शिक्षालाई कलेजका रुपमा विस्तार गर्ने योजनासहित हामी अगाडि बढेका छौं । जुन सेवाग्राही हाम्रो ड्राइभिङ स्कुलमा आइपुग्छन्, उसलाई त्यहाँ आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सिपमुलुक तालिमहरुबाट दक्ष बनाइ रोजगारयोग्य तथा उद्यमी बन्नसक्ने बनाउने योजना छ । पोखरामा मात्रै सीमित नरही पोखरा तथा अन्य जिल्लामा पनि सेवा विस्तार गर्ने सोच छ । आफ्नै जग्गामा ड्राइभिङ स्कुल निकट भविष्यमा नै सञ्चालन गर्ने तयारी छ । ड्राइभिङ सिक्न आएको व्यक्तिलाई पहिलो चरणबाट दक्ष बनाउने काम हाम्रो हो । स्कुल तथा कलेजमा गएर ड्राइभिङ शिक्षाका बारेमा पढाउने काम पनि गरिरहेका छौं । लाइसेन्स लिएर बसेकाहरुलाई हाइवे कोर्ष गराउने काम पनि गरिरहेका छौं । हाइवे कोर्षबाट दक्ष भएकाहरुले व्यावसायिक रुपमा नेपाल तथा विदेशमा गाडी चलाउन सिफारिस गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।